Fallaagada Suuriya oo Laga Daad Gureeyay Bariga Ghouta – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaFallaagada Suuriya oo Laga Daad Gureeyay Bariga Ghouta
Fallaagada Suuriya oo Laga Daad Gureeyay Bariga Ghouta
Hiiraan Xog, Mar 25, 2018:- Kooxaha mucaaradka ee dalka Suuriya ayaa isaga baxay deegaano ku hareeresan bariga magaalada Ghouta ee dalka Suuriya, xilli dowladda Madaxweyne Bashar Al- Asad ay sii xoojisay duqeymaha ka dhanka ah xooggaga mucaaradka ee heysta qeybo kamid ah Suuriya.
Basas ay saaranyihiin kooxaha mucaaradka iyo qoysaskooda ayaa u ambabaxay deegaanka Douma oo ah goob ay maamulaan mucaaradka. Muqaaloo laga helay halkaasi ayaa muujinaya basas ay saaranyihiin dadkaasi oo u ambabaxaya gobolka Idlib.
Waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in kooxda Jaish al-Islam ay magaalada Douma ku wareejinayaan dowladda.
Daad gureynta dagaalamayaasha mucaaradka ayaa qeyb ka ah heshiis uu garwadeen ka yahay Ruushka oo lagu samata bixinayo mucaaradka, waxaana heshiiskaasi uu dhexmaray dowladda iyo kooxda Faylaq al-Rahman.
Ciidammada dowladda ayaa lagu soo warramayaa in imika ay gacanta ku hayaan boqolkiiba toddobaatan deegaanada bariga Ghouta. Dowladda Suuriya oo gacan ka heleysa Ruushka ayaa bishii lasoo dhaafay duqeymo ba’an ka geysatay deegaanada ku hareereysan Ghouda.
Gelinka dambe ee maalintii sabtida ayaa magaalooyinka Zamalka, Arbin iyo Ain Tarma waxaa laga bilaabay in laga daad gureeyo dad shacab ah, dagaalamayaasha mucaaradka iyo qoysaskooda.
Boqolaal qof ayaa lagu dilay deeganaadaasi tan iyo intii ciidammadda dowladda Suuriya oo taageero ka helaya Ruushka ay bilaabeen duullaan ka dhan mucaaradka bishii lasoo dhaafay.
Ruushka ayaa sheegay in inkabaan boqol kun oo qof ilaa iyo imika laga samata bixiyay bariga Ghouda.
DAAWO SAWIRO:- Orod yahan caan ah oo ku biiray koox ka ciyaarta Horyaalka Jarmalka
Guddiga Difaaca oo lagu Wado in ay Su,aalo La Xiriira Xiisada Ka Taagan Beledxaawo Weydiiyan Wasiirka Gaashaandhigga